News - 2018 bandhigga Jarmalka
Sannadka 2018 Automechanika Frankfurt, maanta dunida hoggaamineysa carwada ganacsiga ee warshadaha adeegga baabuurta, MIT AUTOMOBILE SERVICE CO, LTD (MAXIMA), oo ku taal Hall 8.0 J17, cabirka istaagga: 91 sqm. waxay soo bandhigeen alaabada wiishka culus ee caqliga, furitaanka aag cusub oo ah Platform Lift iyo Wireless Mobile Lift oo tiknoolajiyad.
Tikniyoolajiyad casri ah iyo tayo casri ah, ayaa soo jiidatay macaamiil badan si ay u soo booqdaan oo ay u soo kulmaan, sidoo kale farsamayaqaanno fara badan oo facooda ah ayaa u yimid MAXIMA si ay wax u bartaan ugana doodaan.
Wiishka culus ee waajibaadka culus lagu soo bandhigay Automechanika Frankfurt dhammaantood waxay qaataan nidaamka xakamaynta Zigbee, kaas oo xaqiijin kara xakamaynta wireless-ka iyo sidoo kale isku-darka mashiinnada & isku-xirnaanta. Tani waxay muujineysaa in MAXIMA ay sii wadi doonto horumarka dhanka jihada sirdoonka, isla markaana, MAXIMA waxay durbaba taagan tahay heerka dunida ee dhanka teknolojiyadda.